Ukuzivocavoca - iBezzia | Bezzia
Ukuvivinya umzimba kuyinto enempilo emzimbeni wethu futhi kusenza sibonakale sibahle. Njengoba singathanda ukunakekela umzimba wethu nobuhle, lesi sihloko sibalulekile lapho senza umagazini wabesifazane. E-Bezzia, sizophatha i- ukuvivinya umzimba njengesisekelo senhloso yethu yokuzinakekela.
Ngaphezu kokukukhombisa amathuba ahlukile we ukuzivocavoca umzimbaSizokukhombisa ukuthi ungakwenza kanjani kahle, izingubo noma izinto ezidingekayo ukukwenza nezinye izinto ezingavela. Ngaphezu kwalokho, sizogcizelela isidingo sokwenza umsebenzi ojabulisa futhi, ngoba lokhu kuzothonya ukuzinza nokujwayela ukwenza lokhu.
Sikumema ukuba ungene kulo mhlaba othokozisayo.
5 izivivinyo echibini ukunciphisa umzimba
Por UToñy Torres kwenza Amahora we-2 .
Sebenzisa isikhathi sakho echibini ukunciphisa umzimba, ngoba noma yikuphi ukuqeqeshwa emanzini kusebenza kakhulu kune ...
Por USusana godoy kwenza Izinsuku ze-4 .
Zonke izinhlobo zemidlalo zizosifaka emoyeni futhi ngenxa yalokho, zizosishiya nomqondo ocacile futhi ...
Uma ufuna ukwandisa isisindo semisipha, kufanele uhlanganise ukuzivocavoca nokudla okunothe ngama-carbohydrate namaprotheni. Kodwa futhi…
Siza ehlobo, kuleso sifiso sokukwazi ukuhamba, ukuya olwandle noma echibini lokubhukuda kodwa futhi nokuqeqesha….
Ubuwazi ukuthi nge-yoga futhi unganciphisa isisindo? Lokhu kuyinto enzima ukuyibona kulabo abacabanga ukuthi ...
Yini okufanele uyidle ngaphambi kokuphuma nebhayisikili
Uyazi ukuthi yini okufanele uyidle ngaphambi kokuhamba ngebhayisikili? Kulungile namhlanje sizokunikeza imihlahlandlela ehamba phambili ukuze ...
Uma ufuna ukujima okuphelele, okusebenzayo nokujabulisayo, iQueenax ingeyakho. Uhlobo lokuqeqeshwa ...
Ukuzivocavoca okuhle kakhulu kwenhliziyo
Por USusana godoy kwenza Amaviki angu-4 .
Ukuzivocavoca kwenhliziyo kuhlale kukhona kunoma iyiphi inqubo efanele usawoti wayo. Ngoba uchungechunge lwe ...
Ngalesi siqondisi esiyisisekelo sokuqeqesha abaqalayo, ungaqala ukuzivocavoca ngendlela efanele futhi enempilo. Ngoba…
Uyazi ukuthi yikuphi ukuzivocavoca okufanele ukwenze nsuku zonke ukuze ube sesimweni esifanele? Uma ungakacaci kahle, sizokutshela ...
Ukudonswa kwemisipha, noma okubizwa nangokuthi ubunzima bemisipha, kwenzeka lapho imisipha igcwele kakhulu. Lokhu kuyelula ...